प्रहरी हिरासतमा बाहुबलीकी अभिनेत्री राम्या कृष्णन, के गरिन् त्यस्तो ? – Jagaran Nepal
प्रहरी हिरासतमा बाहुबलीकी अभिनेत्री राम्या कृष्णन, के गरिन् त्यस्तो ?
दक्षिण भारतकी चर्चित नायिका तथा बाहुबलीबाट अत्यधिक चर्चामा आएकी राम्या कृष्णननको कारबाट चेन्नई प्रहरीले सय बढी रक्सीको बोतल जफत गरेको छ । राम्या कृष्णनन आफ्नी बहिनी र ड्राइभरसँगै ममलापुरमबाट चेन्नईको यात्रामा थिइन् । यात्राकै क्रममा चेन्नई प्रहरीले चेकपोस्टमा उनको कार रोक्यो र उनको गाडीको अनुसन्धान गर्यो जसमा १ सय ४ वटा बोतल रक्सी पाएपछि नायिका र उनका ड्राइभरलाई प्रहरीले लिएका थिए ।
इन्डिया टुडेको रिपोर्ट अनुसार महाबलिपुरमबाट चेन्नई गइरहेकी राम्या कृष्णननलाई प्रहरीले कार अनुसन्धानका लागि रोकेको थियो । स्रोतका अनुसार उनी निकै शान्त भएर आफ्नो कारको अनुसन्धानका लागि अनुमती दिइन् । यतिबेला कारबाट प्रहरीले १ सय ४ वटा रक्सीको बोतल जफत गरे । लकडाउनको नियम उल्लंघन गरेका कारण प्रहरीले उनलाई हिरासतमा लिएको थियो ।
ड्राइभरलाई प्रहरीले कनाथुर पुलिस स्टेशन पुर्याए, पछि उनले जमानत पाए । खबरका अनुसार राम्या आफैले आफ्नो ड्राइभरलाई हिरासतबाट बाहिर निकालेकी थिइन् । प्रहरीले सामान्य अनुसन्धानका लागि अभिनेत्री र उनका प्रहरीलाई हिरासतमा लिएका थिए । यद्यपि, यसबारे अभिनेत्रीको कुनै प्रतिक्रिया आएको भने छैन ।